LastPass yeApple ine manomwe akavakirwa-mukati mateki, chengetedzo femu inonyevera
Mukuferefeta kwakawanda kwakaitwa nekambani yekuGerman yekuchengetedza, Ekisodho, yakakurumbira password maneja app LastPass yakawanikwa kuunganidza uye kutumira ruzivo rwevanhu nezve vanyoreri vachishandisa iyo Android app. Izvo zvinoita saizvozvo nerubatsiro rweanomwe akasiyana akavakirwa-mukati matracker. Kunyangwe LastPass inokutendera kuti usarudze-kunze kweavo trackers, iko iko kuvapo kwe… [Verenga zvakawanda ...] nezve LastPass yeApple ine manomwe akavakirwa-mukati mateki, chengetedzo femu inonyevera
Dzimwe nhanhatu dzemahara dzimwe nzira kune LastPass password maneja
Yemahara inogara yakanaka, uye kana iyo yemahara app isisina yemahara (kana kana yemahara vhezheni yacho ikave yakaganhurirwa isingabatsire), saka unofanirwa kusarudza kuti wobhadhara here kana kuenderera mberi. Izvi zvakaitika pamwe naEvernote noti maneja manejimendi angangoita makore mashanu apfuura, uye ikozvino yave nguva yevashandisi vemukurumbira password password maneja LastPass kuita zvakafanana sarudzo. LastPass irikuchinja yemahara… [Verenga zvakawanda ...] dzinenge nhanhatu dzemahara dzimwe nzira kune LastPass password maneja